Lozam-pifamoivoizana mahatsiravina :: Olona telo maty, am-polony naratra mafy nofaohin’ny kamiao tapaka hisatra • AoRaha
Lozam-pifamoivoizana mahatsiravina Olona telo maty, am-polony naratra mafy nofaohin’ny kamiao tapaka hisatra
Nandriaka ny ra tany Talatamaty Mangabe, ao an-tampon-tanànan’i Fiana­ratsoa, omaly harivariva, tokony ho tamin’ny 6 ora
latsaka fahefany, vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho. Olona roa no fantatra fa maty tsy tra-drano vokatr’ izany ary iray hafa kosa namoy ny teny an-dalana hihazo ny hopitaly. Olona am-polony ankoatra izay no naratra mafy. Fiara efatra ambin’ny folo kosa no potika niampy môtô scooter iray.
“Kamiao lehibe iray nanao bemidina, teo amin’io toerana io, izay tapaka hisatra no niteraka izao fahavoa­zana mahatsiravina izao”, araka ny fanampim-baovao avy amin’ny mpitandro filaminana any an-toerana.
Avy any atsimo handeha hianavaratra ary mitondra simenitra milanja manodi­dina ny 40 taonina ilay kamiao no izao tra-doza izao. “Nofaohiny avokoa ireo fiara nifanena taminy, izay miisa eo amin’ny efatra ambin’ny folo eo. Môtô scooter iray no voatarika tao amba­niny. Nisy naratra ihany koa ny sasany tamin’ireo mpiva­rotra teo amoron-dalana”, hoy ny Kaomisera iray ao Fianarantsoa.
Maro ireo maratra notao­mina nankeny amin’ny hopitaly. Tsy nahenoana tatitra ny momba azy ireo sy izay mety ho olona hafa namoy ny ainy.
Fidinana ny lalana any Talatamaty Mangabe. Nirimorimo avy any ambony any ilay kamiao. Notron­gisiny avokoa ireo fiara
rehetra nifanena taminy sy ireo nijanona teny an-tsisin’ arabe. Nivadika ary potika vokatr’izany ireo fiara tra-doza. Voahitsaka teo amin’ny arabe ny olona roa ka maty tsy tra-drano. Nisy ny olona nosokirina avy tao anaty fiara. Tonga nanampy ny foko­nolona teny an-toerana ny mpitandro filaminana, avy amin’ny polisy sy zandary, tamin’ny fitaomana ireo naratra nankeny amin’ny
hopitaly. “Nisy ireo olona tsara sitrapo avy hatrany dia namoaka ireo mpandeha niharan-doza tao anatin’ny taksibe”, araka ny voalazan’ ireo nanatri-maso ny loza.
Tapaka tanteraka nandritra ny ora maromaro ny lalana teo amin’io faritra io. Fantatra kosa fa nitsoaka noho ny tahotra ny mpamilin’ilay kamiao ary tsy mbola hita izy hatramin’ny fotoana nanoratana. Ny Polisim-pirenena ao Fianarantsoa no misahana ny famotorana, an’ity raharaha ity.
Fivarotana zava-mahadomelina :: Maorisiana telo sy vehivavy malagasy iray nadoboka am-ponja
Asan-jiolahy :: Frantsay iray notsindron’ny mpanendaka tamin’ny antsy